SONATA-CANTATA: Celebration Children Day
ကျေးဇူးပါပဲ TD ရေ.. အတွေ့အကြုံတွေ ဝေမျှတဲ့အတွက်..။
မမကတော့ ငိုချင်လျက်ကို လက်တို့ပါပြီ။
ကျန်ခဲ့တဲ့ အပတ် ဥပုသ်နေ့ကပေ့ါ။ မမတူ အကြောင်း တိုင်ရဦးမယ်။ (စပြီ၊ စပြီ၊ လေကြောင်းမိတော့မှာ ကြောက်ပြီး ထွက်မပြေးသွားနဲ့ဦးနော်။) မမကမှာထားလို့ ၀ါတွင်းဥပုဉ်လေးတော့ ငါဖြစ်အောင် စောင့်မယ်ဟဲ့ ဆိုပြီးClementi ကျောင်းသွား ဥပုသ် ယူတယ်။ ချက်ချင်းထပြန်မဲ့ဟာကို အသိအစ်မ တစ်ယောက်က ထမင်းစားပြီးမှ ပြန်ပါဆိုလို့ အခြားဥပုသ်သည် သုံးလေးဆယ်လောက်နဲ့ ထမင်းဝင်စားတယ်ပေါ့။ အလှူရှင် တစ်ယောက်ကလည်း ဒန်ပေါက်လှူတာတဲ့။ စားနိုင်ရင်စားပါဆိုလို့ ဒန်ပေါက်ကို ထမင်းခပ်ဇွန်းကြီး တစ်ဇွန်းစားလောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပန်းကန်တွေ ၀ိုင်းကူဆေးပြီး အချိုပွဲက ကျောက်ကျော စိမ်းစိမ်းလေးတွေ (အုန်းနို့တော့ နဲနဲပါတယ်) သုံးလေးတုံး ပါးစပ်ထဲ ကောက်ထည့်ပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ ရထားပေါ်မှာတင် အခြေအနေက မဟန်တော့ဘူး ခေါင်းတွေ ကိုက်တာ။ အိမ်ရောက်ရောက်ချင်း သံပုရာရည်ဖျော်။ အမေ့အတွက်ဟာကို သူက မသောက်သေးဘူးဆိုတော့ သိမ်းပြီး (သြော် ယောက္ခမကြီးကတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကျန်ခဲ့သေးတယ်။) သံပုရာရည်ကိုသောက်။ ဟော သားတောာ်မောင် ကျောင်းကပြန်လာပါပြီ။ ဖိနပ်ချွတ်ရင်းပြောတယ်။ "မေမေ သားကျောင်းပြန်သွားရမယ်" တဲ့။ "ဘာဖြစ်လို့လဲ။" "သားကျန်ခဲ့တဲ့ အပတ်က Science ဖြေတာ ၂၀မှာ ၉မှတ်ပဲရလို့ ဆရာမက ပြန်သင်ပေးဖို့ ခေါ်တာ။" "ဒီနေ့ ကျူရှင်သွားရမယ် မဟုတ်လား။" "ကျူရှင်ဆရာမဆီ မလာနိုင်ကြောင်း message ပို့လိုက်တော့ မေမေ။" လုပ်ပြန်ပြီ။ သောကြာနေ့တုန်းကလည်း တရုတ်စာ အမှတ်နည်းလို့ ကျောင်းကဆရာမ ပြန်ခေါ်လို့ ကျူရှင်ဖျက်ထားရတယ်။ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ ကျူရှင်ဆရာမဆီ message ပို့တော့ message ပြန်လာတယ်။ ok ဘယ်unit ကိုတော့ အိမ်စာ လုပ်ထားပါပေ့ါ။ သားကတော့ ထမင်းစားပြီး ကျောင်းကို ပြန်ထွက်သွားပါပြီ။ ကိုယ်ကတော့ ခေါင်းတွေကိုက်လို့။ ညနေ ထမင်းစားချိန်ရောက်တော့ သူတို့နှစ်ယောက်ကို ထမင်းခွံ့ရသေးတယ်။ ယောင်ပြီး ကိုယ့်ပါးစပ်ထဲ တစ်လုပ်လောက် မထည့်လိုက်မိဖို့ သမာဓိ အကူအညီကို အပြင်းအထန် ယူထားရတဲ့ အစားငန်းတဲ့ ဥပုသ်သည်ရဲ့ ဖြစ်အင်။ ၅နှစ်သားငယ်ကို ခွံရတယ်ဆို ထားတော့ အဲ့ဒီ ၁၁နှစ်သားကလည်း ခွံ့ရတာပဲ။ ဒွက်ခဒွက်ခ ကိုယ့်အပူ ကိုယ်ရှာတာလေ နော်။ ထမင်းစားပြီးတော့ “သား အိမ်စာလုပ်။ ဆရာမ စာပေးထားတယ်” ပြောပြီး အိမ်ရှေ့ဝရံတာကို ထွက်ပြီး နေလိုက်တယ်။ သူတို့နားနေရင် အခြေအနေတွေက တစ်မျိုးမဟုတ် တစ်မျိုးနဲ့ တင်းမာလာနိုင်တယ်။ အိမ်ထဲပြန်ဝင်လာပြီး တော်တော်လေးနေတော့မှ TVရှေ့ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ သားတော်မောင်ကို homework ပြီးပြီလားဆိုတော့ အင်း ဆိုလို့ စားပွဲပေါ်က စာအုပ်ကို ယူကြည့်လိုက်တော့ စာအုပ်ထဲမှာ ဟောင်းလောင်း အပေါက်တွေ။ ဥပုသ်သည် သိပ် သည်းမခံနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်။ စားပွဲပေါ်မှာလည်း စာရွက်တွေက ရှုပ်ပွ ဘောလ်ပင်တွေက ခေါင်းတခြား ကိုယ်တခြား။ အထဲက မှင်တံတောင် ဓားနဲ့ ပိုင်းဖြတ်ထားတာပါ ပါသေး။ မရတော့ဘူး မရတော့ဘူး လွှတ်ပြီ။ တင်ပြီ။ ဥပုသ်သည်တဲ့ ၀တ်ထားတဲ့ လုံချည်က ဒူးအထက်နားတက်ချင်နေပြီ။ ကလေးကို မ ရိုက်ဖို့ လှမ်းပြောနေကြတဲ့ သားရဲ့ အဖွား နှစ်ယောက်ကတော့ ကျမကို အရူးမ တစ်ယောက်လို ထိုင်ကြည့်နေကြလေရဲ့…ဟင်းးးးးးးးး
ပြန်လာဖတ်သွားတယ်။ နှမြောစရာကွယ်။ဘာဖြစ်လို.့ ကွန်မက် ထဲရေးတာလဲ။ ဒါ ဟာ ပိုစ် တစ်ခုပေါ.။ ခံစားလို.ရပါတယ်။ ဒီလို ကိုယ့်ဘဝကို နှစ် မြှုပ် ပေးထား ရတာ ကို အိမ်ထောင် ဦးစီး ကိုဧရာ က အသိအမှတ် ပြူဘို့ လိုအပ် တယ်။
(ထိုင် မငိုနဲ့နော်. ထပ် ချွန်မိပြန်ပြီ)
အပေါ်က Comment ကို ပိုစ့်တစ်ခုလုပ်ပြီး တင်လိုက်ပါ...
အရမ်း သရုပ်ပေါ်လွန်းလို့ ပါ...။